လေထုနှင့်လေဟာနယ် Distillation ယူနစ်
ဖော်ပြချက် coking မီးဖို၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျန်ရှိသော oi ကိုအပူပေးသည်။
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ Steam Reformer သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်တွင် c နှင့်ပါသောဓာတ်ပေါင်းဖိုဖြစ်သည်။
အပူပိုက် Air Preheater
Heat Pipe Air Preheater ၏ကောင်းကျိုးများ ၁ ။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အလယ်အလတ်ဖိအားရှိသည့်ရေနွေးငွေ့နှင့်အစာဓာတ်ငွေ့ရောနှောခြင်းကို feedstock သို့ ...
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ လေထုနှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းခံစက်ရုံသည်ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှု၏ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီးရေနံချက်စက်ရုံစုစုပေါင်းစီးဆင်းမှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဓာတ်ငွေ့၊ ဂျက်လောင်စာ၊ ပေါ့ပါးသောဒီဇယ်ဆီ၊ လေးလံသောဒီဇယ်လောင်စာ၊ လေဟာနယ်ဓာတ်ငွေ့စသည်တို့ကိုဤလေထုနှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းခံစက်များ အသုံးပြု၍ ရေနံစိမ်းကိုတင်ပြီးတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ 2. လေထုလေဟာနယ်မီးဖို၏နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာအောက်ပိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ - သန့်စင်သောအရာ၊ အီတီလင်း pyrolysis feedstock၊
၁။ လေထုနှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းခံခြင်းသည်ရေနံချက်စက်ရုံ၏ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီးရေနံချက်စက်ရုံစုစုပေါင်းစီးဆင်းမှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဓာတ်ငွေ့၊ ဂျက်လောင်စာ၊ ပေါ့ပါးသောဒီဇယ်ဆီ၊ လေးလံသောဒီဇယ်လောင်စာ၊ လေဟာနယ်ဓာတ်ငွေ့စသည်တို့ကိုဤလေထုနှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းခံစက်များ အသုံးပြု၍ ရေနံစိမ်းကိုတင်ပြီးတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။
၂။ လေထုလေဟာနယ်မီးဖို၏နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာအောက်ပိုင်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်စင်သောကုန်ကြမ်းများ၊
3. လေထုနှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းခံအမျိုးအစားသုံးမျိုးရရှိနိုင်သည် - လောင်စာဆီအမျိုးအစား၊ လောင်စာဆီချောဆီအမျိုးအစားနှင့်လောင်စာဓာတုအမျိုးအစား။ သူတို့ကအပိုင်းအစများ၏တိကျမှလွဲ။ မရှိမရှိမဖြစ်ခြားနားချက်ရှိသည်။ လောင်စာဆီချောဆီအမျိုးအစားယူနစ်သည်အခြားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များရှိသည်။
၃.၅ သန်း t / y လေထုနှင့်ဖုန်စုပ်စက်များ
5 သန်း t / y ကိုလေထုနှင့်လေဟာနယ်ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်ယူနစ်
၈ မီလီယံ t / y လေထုနှင့်ဖုန်စုပ်စက်ကိုယူနစ်
3 သန်း t / y ကိုလေထုနှင့်လေဟာနယ်ပေါင်းခံ
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. ကုန်ပစ္စည်းများ Hot - Sitemap - AMP Mobile
Rail Transit ၊ အပူပေး ၊ သံထည်လုပ်ငန်း ၊ မီးရထားတိုင်ပင်ခြင်း ၊ ရေ ၊ Block ကိုလျှော့ချ ၊
အီးမေးလ်: sales@dfct-group.com 13801428399@126.com